Miskiin iyo Tuug Maxaa kale qabsadey? - BAARGAAL.NET
Miskiin iyo Tuug Maxaa kale qabsadey?
✔ Admin on January 15, 2009 0 Comment
Beri baa waxaa jiray labo nin oo miskiin ah, waxa ay degnaayeen qol yar oo u dhaw suuqa xoolaha, qolkoodana ma oolin wax gogol ah oo ay ku jiiftaan, waxay seexan jireen dhulka. Sidey u kalahaan subaxda ayay ku soo noqon jireen qolkooda yar habeenka.
Maalin maalmaha kamid ah ayaa gaari inataree ah oo rar ku dejinayey bakhaar looga yeeray, ninkii bakhaarka lahaa ayaa ku yiri labadii nin ee miskiin ahaa Haddii aad dejisaan rarkaan gaariga saaran waxaa
idiin siinayaa jawaan bariis ah sidiina ayayna faleen. Iyagoo socodka la luudayaa, jawaankiina midba mar dhabarka ku jiidayay ayay xaafadoodii yimaadeen
Waxa ay karsadeen casho, casha kadibna way seexdeen. Saqdii dhexe goor ay ahayd ayaa waxaa aqalkoodii u soo dhacay tuug, tuugii ayaa qolkii waxa uu ka raadiyey wax uu ka qaato, nasiib darrose ma uusan arkin wa uu qaato oo aan ahayn jawaanka bariiska ah. Tuugii wuxuu ku fekaray inuu xoogaa bariis oo u qaadi karo ka shubto, wuxuu raadsi u galay maro uu ku shubto bariiska, markii uu wayay wuxuu ku shubto ayuu shaatigiisa furtay, kadibna bariiskii ayuu buuxsaday, isagoo weli ku sii jeeda jawaanka bariiska, ayaa waxaa ku soo toosay mid ka mid ay labadii miskiin, isagoo iska dhigaya ruux hurda, ayuu intuu laacay shaatiga tuuga oo u dhawaa hoostiisa gishtay oo uu qarsadey. Tuuggii ayaa markuu soo jeestay waayay shaartigiisa, intuu geesaha eegay ayuu yaabay.
Waxaa isna jabaqdii tuugga ku kacay kii kale ee hurday, markii uu arkay in tuug uu guriga dhex joogo ayuu is yiri bal saaxiibkaa toosi oo u sheeg, waxana uu bilaabay in uu si yar u toosiyo saaxibkiis isagoo leh toos tuug ayaa jooga guriga, Saaxiibkiis oo is moogaysiinayana waxa uu ugu jawaabay tuug ma joogee naga seexo markuu sidaas ku cel celiyey dhowr jeeer ayaa tuugii hadlay markuu is celin waayey oo yiri haddaan tuug joogin guriga yaa qaatay shaatigaygii?